Kulan lagu taageerayo horumarka dowlad deegaanka DDS oo beesha Bahgari ku yeelatay Sweden(Baaq Sawiro) | Daraawiish.com
Shir kadhacay magaalada madaxda wadaka sweden ee stokholm ayaa waxaa iskugu yimid beesha bahgari oo ay hormuud u ahaayeen xubana ururka dhalinyarta sedyo Sweden.
Shirkan oo ahaa shir ay beeshu ku taageraysay horumarka iyo nabada DDS ethiopia ee uu hormuudka uyahay madaxwaynaha mudanec Maxamud Cumar iyo xukumadiisa ayay wax beeshu taagero kal iyo laaba lagabarab istaagtay Xukumada balana kuqaaday inay ka qayb qaadato hurmuarka wadanka .
Shirkan oo ahaa shirkii ugu horeeyay ee ay iskugu timaado beeshu ayaa waxaa uu kudhamaaday jawi aad ufiican iyaga oo isku afgartay inay diraan laba xubnood oo wadanka soo arkana soona daraasadeeya horumarka noocyada badan ee ka socda lana soo noqdaan wax lagu qanco kadaibna si ay umaalgashadaan deegaankooda waxay beeshu u taagantahayinay si kal iyo laaba umaal gashato degaankooda.
Waxaa markasta ka muuqday ururka dhilinyarta sedyo sweden oo iyagu ah urur utaagan baraarujinta iyo wac yigalinta quraba joogta waxaana goobjooga ahaa madaxa qasnajiajiga ururka dhalinyarta sedyo sweden .
Mudane Abshir Dubad
← Beesha Bahgari kismayo somalia
Waxaa si wada jira u diraya Baaq Nabadeed qaar ka mid ah odayaasha beesha Bahgari iyo Cawlyahan ee Waqooyi Ameerika iyo Yurub, →